एक हजार वर्ष ऐतिहासिक पुरानो कचौराको मूल्य तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: ०:५१:०१
एजेन्सी । एउटा कचौराको सर्बाधिक बढी मूल्य कति होला ?
५ हजार १० हजार वा ५० हजार डलर ? पत्याउनै नसकिने मूल्यमा हङकङमा एउटा कचौरा तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा लिलाम भएको छ । त्यो पनि चुन ढुंगाबाट बनेको ।
एक हजार वर्ष पुरानो यो कचौराको विशेष महत्व भएका कारण आँफुले यति ठूलो मूल्उ हाल्न तयार भएको उनले बताएका छन् ।
१३ सेन्टिमिटरको नीलो–हरियो रंगको कचौरा लिलामीका लागि १ करोड २० लाख डलरबाट शुरुवाती रकम तोकिएको थियो ।
२० पटकको बोल कबोलमा यो मूल्यमा बिक्री भएको हो ।
Last Updated on: June 4th, 2021 at 12:51 am